Yakachipa Vertical Waste & Manyowa Kuchenesa Tank Kompositi Kugadzira Machine Vatengi uye Fekitori | YiZheng
Chii chinonzi Vertical Waste & Mufudze Kuvira Tank?
Vertical Waste & Mufudze Kuvira Tangi ine hunhu hwepfupi yekuvira nguva, inovhara diki nzvimbo uye ine hushamwari nharaunda. Iyo yakavharwa aerobic yekuvirisa tangi inoumbwa nemapfumbamwe masystem: feed system, silo reactor, hydraulic drive system, kufefetedza system, kuburitsa system, kupedza uye deodorization system, pani uye yemagetsi control system. Mombe uye mupfudze wehuku zvinokurudzirwa kuwedzera hushoma hwevabudisi senge mashanga uye microbial inoculum zvinoenderana nehunyoro hwavo uye kukosha kwekupisa. Iyo yekudyisa sisitimu inoiswa musilo reactor, uye mutsvina inoshungurudzwa nemhepo inopisa yemagetsi yekutyaira kuti igadzire kuenderera kwekushushikana kwenyika mudiro. Panguva imwecheteyo, iyo aeration uye yekupisa yekudzoreredza michina yemidziyo inopa yakaoma inopisa moto kune iyo aeration impeller mashizha. Yunifomu inopisa nzvimbo yemhepo inoumbwa kuseri kweiyo chipande, iri mubatano izere nezvinhu zvekuwanisa oxygen uye kupisa kupisa, dehumidification uye kufefetedza. Mhepo inounganidzwa uye inorapwa kubva pasi peiro nesiro kuburikidza nesitaki. Iyo tembiricha iri mutangi panguva yekuvira inogona kusvika 65-83 ° C, iyo inogona kuve nechokwadi chekuuraya kwezvirwere zvakasiyana siyana. Hunyoro hwezvinhu mushure mekuvirisa ingangoita 35%, uye chigadzirwa chekupedzisira chakachengeteka uye hachikuvadze manyowa. Iyo reactor yakavharwa yakazara. Mushure mokunge hwema hwaunganidzwa kuburikidza neepombi yepamusoro, inoshambidzwa uye yakadonhedzwa nemvura inopfachukira uye ndokuburitswa kune yakajairwa. Icho chizvarwa chitsva che organic fetiraiza yekuvirisa tangi iyo inokodzera kumatunhu akasiyana, zvichienderana nemidziyo yakafanana uye kuburikidza nekuvandudza uye kukwidziridza. Yepamberi tekinoroji nhanho uye inofarirwa nevazhinji vemusika.
Chii chinonzi Vertical Waste & Manure Fermentation Tank Inoshandiswa?
1.The Vertical Waste & Manyowa Kucherisa Tank michina inogona kushandiswa pakurapa yenguruve mupfudze, huku mupfudze, mupfudze wemombe, gwai mupfudze, howa tsvina, Chinese mushonga marara, chirimwa mashanga uye imwe organic organic.
2. Inongoda maawa gumi kuti ipedze nzira isingarapike yekurapa, iyo ine zvakanakira kuvhara zvishoma (muchina wekuvirisa unongovhara nzvimbo inosvika 10-30 mativi emamirimita).
3. Ndiyo sarudzo yakanakisa yekuona mashandisirwo emashandisirwo emarara emabhizinesi ezvekurima, kurima kwedenderedzwa, kurima kwezvakatipoteredza.
4. Uye zvakare, zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, isu tinokwanisa kugadzirisa 50-150m3 kugona kwakasiyana uye akasiyana mafomu (yakatwasuka, yakamira) yekuvirisa tangi.
5. Mukuita kwekuvira, aeration, tembiricha kudzora, kusagadzikana uye deodorization inogona kudzorwa otomatiki.
Vertical Waste & Mufudze Kuvira Tank Zvimiro
1.On-mutsetse CIP kuchenesa uye SIP sterilization (121 ° C / 0.1MPa);
2. Maererano nezvinodiwa zvehutsanana, dhizaini dhizaini yakanyanya kufanana nevanhu uye nyore kushandisa.
3. Chiyero chakakodzera pakati pehupamhi nekureba; zvinoenderana nekudikanwa kwekugadzirisa mudziyo unosanganisa, saka simba rekuchengetedza, richikurudzira, iko kuvirisa kwakanaka.
4. Iyo tangi yemukati ine yepamusoro polishing kurapwa (roughness Ra iri pasi pe0,4 mm). Nzvimbo dzose dzinobuda, girazi, manhole zvichingodaro.
Zvakanakira Vertical Waste & Mufudze Kuvira Tanky
•Vertical dhizaini inotora diki inotora nzvimbo
•Kuvhara kana kuvhara kuvirisa, hapana hwema mumhepo
•Wide kunyorera kuguta / hupenyu / chikafu / gadheni / tsvina tsvina kurapwa
•Magetsi kudziyisa kuendesa oiri nekotoni kupisa kupisa
•Rwomumwoyo runogona kuva rwesimbi simbi ine ukobvu 4-8mm
•Iine insulating jekete rejasi kunatsiridza tembiricha yekuumba
•Nesimba kabati kudzora tembiricha otomatiki
•Kushandisa nyore uye kugadzirisa uye inogona kusvika pakuzvichenesa
•Paddle inosanganisa shaft inogona kusvika izere uye izere kusanganisa uye kusanganisa zvinhu
Chain Plate Composting Turner Machine Vhidhiyo Ratidziro
Pashure: Double Screw Komposting Turner
Zvadaro: Forklift Type Composting Midziyo